हाम्रो स्वभाव दर्शक मैत्री बनाउनु पर्दछ ः नायक अभय चन्द – Namaste Filmy
नायक अभय चन्दको पहिलो चलचित्र प्रमोद भण्डारीद्धारा निर्देशित “सपथ” हो । यस चलचित्रमा नायिका रेखा थापासँग शिर्ष भुमिकामा देखिनु भएको थियो । छवीराज ओझाद्धारा निर्माण गरिएको ‘ हमेशा” उहाँको दोस्रो चलचित्र हो । रेखा थापा नायिका रहेको र सबिर श्रेष्ठद्धारा निर्देशित यस चलचित्रबाट उहाँ निकै चर्चामा रहन सफल समेत हुनु भएको थियो । सन्देस बराइलीद्धारा निर्माण गरिएको चलचित्र “एक्सिडेन्ट” भने रिलिजको क्रममा नै रहेको छ । यस चलचित्रमा नायक अभयसँग मुकेश ढकाल र किरन थापा देखिनु हुनेछ । निर्देशक श्याम भट्टराई र नायिका रेखा थापा बिच निर्देशनको विषयलाई लिएर ठूलै विवादमा रहेको चलचित्र “हिम्मतवाली” को छायाँकन सकाएर भरखर मात्र काठमाण्डौं फर्कनु भएको यीनै नायक अभय चन्दसँगको कुराकानीको छोटो अंश प्रस्तुत गरिएको छ ः
प्रश्न ः तपाईलाई त नेपाली चलचित्रहरुको भाग्य मानी नायक भनिन्छ नी ?
उत्तर ः हाहाहा…..। तपाईले सुपर नायिका रेखा थापासँगको प्रसंग लाई जोडेर भन्नु भएको जस्तो लाग्यो । वास्तवमा यो एउटा संयोग पनि हो । तर भाग्यमानी हुँ भन्दा पनि फरक पर्दैन । मैले यस्तो शौभाग्य पाए की रेखा थापा जस्ती नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित तथा सुपर नायिकासँग लगातार काम गर्ने अवसर जु¥यो । यस अवसरबाट मैले चाडै नै धेरै कुराहरु सिक्ने मौका पनि पाएँ । यस अर्थमा त भाग्यमानी भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
प्रश्न ः तपाईको पछिल्लो चलचित्र “हिम्मतवाली”को बिषयमा त झनै ठूलै हंगामा चल्यो नी ?
उत्तर ः यो उहाँहरुको ब्यक्तिगत कुराहरु हुन । तर यस चलचित्रको सुटिङ्ग कै दौरानमा मैले युनिटका साथीहरुको समेत राम्रो प्रशंसा प्राप्त गरेको छु । मलाई ज्यादै उत्साह पनि मिलेको छ । मलाई लाग्छ दर्शकले समेत मेरो भूमिका र अभिनयको खुलेर प्रशंसा गर्नु हुने छ ।
प्रश्न ः “हिम्मतवाली”मा कस्तो भूमिकामा देखिदै हुनु हुन्छ नी ?
उत्तर ः यो एक्सन प्रधान चलचित्र हो । यसको द्धन्द्ध निर्देशन अहिलेको चर्चित द्धन्द्धनिर्देशक चन्द्र पन्तले गर्नु भएको हो । यसमा उहाँले बढो सानदारले द्धन्द्धको सृजना र संयोजन गर्नु भएको छ । यस चलचित्रको प्रर्दशन पछि दर्शकहरुले मलाई “एक्सन हिरो”को रुपमा चिन्नु हुने छ भन्ने आशा समेत गरेको छु ।
प्रश्न ः अहिले सम्मको चलचित्र क्षेत्रको अनुभव कस्तो पाउनु भएको छ त ?
उत्तर ः सबैले आ–आफ्नो काम गर्ने हो । मलाई कसैको प्रगति प्रति रिस राग पनि छैन । कसैको दुःख पिंडामा खिस्याँई पनि गर्नु छैन । सबैसँग मिलेर काम गरिरहेको छु । दर्शकहरु, शुभचिन्तकहरुसँग भेटघाट हुन्छ । खुलेर कुरा गर्छु । मलाई रमाइलो लाग्छ । अहिले सम्मको अनुभवमा त रमाइलो लागि रहेको छ ।
प्रश्न ः” हिम्मतवाली’ पछि अब त केहि दिनको लागि त आराम पाउनु भयो नी, के गर्नु हुन्छ त अब यो फुर्सदमा ?
उत्तर ः आराम गर्ने बिचारमा त थिएँ । तर धनगढीबाट काठमाण्डौं आएकै दिन दुइ चलचित्रका लागी कुरा आएको छ । कुर्बानको काम चाहिँ केहि दिनमा नै सुरु हने भएको छ । त्यसैमा ब्यस्त हुन्छु की भन्ने पो लागि रहेको छ ।
प्रश्न ः अन्तिममा केहि छ भन्नु पर्ने ?
उत्तर ः चलचित्रमा अभिनय गर्दैमा संसारकै हिरो अनि सबैको मान्य गुन्ने हुने होइन । हाम्रो स्वभाव दर्शक मैत्री बनाउन सक्नु पर्दछ । अनि मात्र हामी वास्तवमा सम्मानीत कलाकार हुन सक्छौं । मलाई नेपालीको मात्र होइन सम्पुर्ण प्राणीसँग नै प्रेम छ । हामी अहंममा बाँच्न हुन्दैन भन्ने सन्देशका साथै मेरो चलचित्रलाई मन पराइ दिनु होला । राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सनु होला भन्ने अपेक्षा राख्दछु । धन्यवाद ।
सुटिङको लागी रेडी भयो 'कुर्बान' । १७ गतेबाट फ्लोरमा जाने ।
बलिउड कलाकारको नेपाल प्रेम । अर्शद वारसी नेपाल आउदै ।